Guddiga dib u eegista Dasruurta oo kulan la qaatay Guddiga xuduudaha (SAWIRRO) – Radio Baidoa
Guddiga dib u eegista Dasruurta oo kulan la qaatay Guddiga xuduudaha (SAWIRRO)
By Webmaster	 On Aug 3, 2018
Kulanka ayaa ku saabsanaa dib u eegista Dastuurka iyo ballaarinta hannaanka federaalaynta dalka, waxaanay iska xog wareysteen waxyaabihii u qabsoomay iyo qodobbada haatan hor yaalla.
Guddiga ayaa soo bandhigay cilmi baaris ay ku sameeyeen hab-raaca xudduudaha Dowlad Goboleedyada, Degmooyinka iyo soohdimaha Soomaaliya ay la wadaagto wadamada deriska la ah.
Guddomiyaha guddiga Madaxa bannaan ee xudduudaha iyo Federaaleynta, khalliif Cabdikariin Maxamed ayaa sheegay in kulanka laga soo saaray habka ugu wanaagsan ee lagu sameyn karo magacaabista Degmo ama Gobol, taasi oo ku saleysan tira badnaashada dadka, dhaqaalaha, xudduuda, iyo afti dadweyne oo la qaado.
“Waa wax loo baahan yahay in la ogaado xudduudaha Gobollada Degmooyinka iyo soohdimaha Soomaaliya ay la leedahay dalalka deriska ay la tahay iyadoo lagu saleynayo dastuurka dalka” Ayuu yiri Guddoomiyhu.
Guddoomiyaha Gudiga dib u eegista Dastuurta Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya Senetar Cabdi Xasan Cawaale Qeydiid ayaa ku amaanay Guddiga shaqada waaangsan ay qabteen, isagoo sheegay in ay soo aqrin doonaan qodobbada baarsita ay ku sameeyeen.
”Waa idinku ammaanayaa shaqada aad qabateen, waana soo aqrin doonnaa qodobbada aad soo qorteen hadii sidaan marwalbo laysku kaashado waxay wax ku kordhineysaa dhameystirka Dastuurka KMG ah”. Ayuu yiri Cabdi Qeybdiid.
Qorshaha dhameystirka Dasruurka KMG ayaa ah in lagu dhameystiro inta ka harsan sanadkan, si dalka uu u yeesho Dastuur buuxa, si dalka uu u galo doorasho qof iyo cod ah 2020-ka.
Waare oo gaaray Beledweyne
RW:Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hadlay qoondada shidaalka ay Soomaalida yeelanayso